Obama oo dhaqaalo ugu yaboohay wadamo Soomaaliya ka mid tahay
Madaxweynaha wadanka Maraykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay lacago dheeraad ah oo loogu talo galay in raashin gar gaar ah loogu iibiyo wadamo ku yaala qaaradda Africa oo ay Soomaaliya ku jirto kuwaasoo ay saameeyeen abaaro baahsan.
Madaxweyne Obama waxaa uu xusay in lacag dhan 3 billion oo Dollar uu ugu deeqayo wadamo ku yaala geeska Africa oo ay si daran u saameeyeen abaarihii dhawaan ku dhuftay gobolka waxaana uu ugu baaqay wadamada ku jira ururka G8,ka la yiraahdo ee dhaqaalaha ku hormaray inay qaadaan tilaabooyin tilaabooyin ay ku caawinayaan dadka dhibaataysan.
War laga soo saaray xafiiska Madaxweynaha Maraykanku ku leeyahay aqalka cad ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in lacagtaan Maraykanku ku taageeray wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay loogu talo galay in inta raashin lagu iibiyo la gaarsiiyo dadka ubaahan gar gaarka ku dhibaataysan gudaha dalka.
Sidoo kale lacagtaan waxaa ka faa’idaysan doona qaxootiga Soomaaliyeedee ku jira xeryaha ku yaala wadamada Soomaaliya dariska la ah ooiyagana aydhibaatooyin nololeed haystaan.
Madaxweynaha Maraykanka waxaa uu u balan qaaday qaaradda Africa inuu u dajiyay qorshe lagu hormarinayo oo lagu taageerayo qaaradda kasoo socon doona 10-ka sano ee soo socota.
Malaayiin ruux oo ku nool wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya ayaa la il daran macaluul ay kadhaxleen abaartii sanadkii hore gobolka ku dhufatay taasoo aheyd abaartii ugu xumeyd ee muddo 60 sano ah soo martay geeska Africa